एनआरएन अध्यक्षमा घले र भट्टको उम्मेदवारी घोषणा, के छ उनीहरुको प्रतिबद्दता ? « Npnews
एनआरएन अध्यक्षमा घले र भट्टको उम्मेदवारी घोषणा, के छ उनीहरुको प्रतिबद्दता ?
काठमाडौँ, २६ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आठौँ विश्व सम्मेलन एवं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यसको नेतृत्व लिन दुईजनाले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । अध्यक्षका लागि संघका उपाध्यक्ष भवन भट्ट र सदस्य जमुना गुरुङले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ ।